Tue, Jul 7, 2020 at 10:56pm
काठमाडौँ, २८ कात्तिक गत असोज २४ गते प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ ले यस वर्ष सबैभन्दा बढी कमाइ गरेको अभिनेता दीपकराज गिरीले बताएका छन् । असोज ३ मा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कबड्डी ३’ लाई पनि यस वर्ष सर्वाधिक कमाउने ब्लकबस्टर फिल्म भएको कबड्डी टिमले दाबी गरेको थियो । गिरीका अनुसार ‘छ माया छपक्कै’ वर्षकै सर्वाधिक कमाइ गर्ने चलचित्र बन्न सफल भएको छ..
काठमाडौँ, २४ कात्तिक असोज ३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको ब्लकबस्टर फिल्म ‘कबड्डी ३’ ले ५१ औँ दिन मनाएको छ । शनिवार राजधानीको बिग मुभिज, एफक्युब, गोपीकृष्ण, गुण सिनेमा र अष्टनारायण हलमा फिल्म ५१ औँ दिनमा प्रदर्शनमा आएको हो । फिल्मले ५१ औँ दिनमा आइपुग्दा १४ करोड ग्रस कलेक्सन गरेको वितरक कम्पनी स्टेशन फाइभले जनाएको छ । ‘कबड्डी’ सिरिजका फिल्ममध्ये यति धेरै कमाउन सफल यही..
काठमाडौँ, ८ कात्तिक नेपाली हलमा शुक्रबारबाट फिल्म ‘पोईपर्‍यो काले’ प्रदर्शनमा आएको छ । शिशिर राणाको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा अभिनेता आकाश श्रेष्ठ, सौगात मल्ल, अभिनेत्री पुजा शर्मा, सृष्टी श्रेष्ठ, सोहित मानन्धर, राजाराम पौडेल लागायतको अभिनय छ । किरण नेपालीको प्रस्तुती तथा राजिव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे) र सरोज नेपालीको लगानी रहेको फिल्मले रंगभेद विरुद्धको कथा बोल्ने छ । तिहार पर्वमा पर्ने विदा लक्षित नेपाली फिल्महरू..
बुधबार, कार्तिक ६, २०७६ साल
काठमाडौं, ६ कात्तिक गत असोज २४ गते रिलिज भएको चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ले प्रदर्शनको दोस्रो साता पनि उत्साहजनक ब्यवसाय गर्न सफल भएको छ । फिल्मले प्रदर्शनको पहिलो साता झै दोस्रो साता पनि राम्रो व्यवसाय गरिरहेको निर्माता रोहित अधिकारीको भनाइ छ । ‘फिल्मले गत शनिबार पहिलो साताझै देशभरका हलमा हाउसफलुको ब्यवसाय गर्यो’ अधिकारीले भने ‘अहिले पनि सबै चलचित्र भवनमा दर्शक राम्रो देखिएका छन्..
एजेन्सी, २ कात्तिक गायक अमाल मलिक र अभिनेत्री तथा गायिका सोनाक्षी सिन्हाको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन । त्यसैले पनि हुनुपर्छ मलिकले सोनाक्षीको आज मूड वाला गीतलाई बकवास भनिदिएका छन् । यो एउटा कार्यक्रममा अमालले भनेका हुन् । उनको यो अभिव्यक्तिले अहिले बलिउडमा निकै ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । त्यसो त अमाल र सोनाक्षीबीच केही अघि देखि नै विवाद रहेको थियो । यो..
काठमाडौँ, १ कात्तिक बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले ‘द स्काई इज पिंक’ फिल्मबाट कमब्याक गरेकी थिइन् । यस फिल्मबाट उनले धेरै आशा गरे पनि फिल्मले भने दर्शकको मन जित्न नसकेको समाचार छ । फरहान अख्तरको समेत मुख्य अभिनय रहेको ‘द स्काई इज पिंक’ शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको हो । सन् २०१६ मा प्रदर्शनमा आएको ‘दिल धड्कने दो’ पछि यसै फिल्ममार्फत बलिउडमा कमब्याक गरेकी प्रियंकाको फिल्मले प्रदर्शनको..
काठमाडौँ, ३० असोज असोज २४ बाट दिपक दिपा टिमको फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ सिनेमा हलमा चलिरहेको छ । यस फिल्मलाई दर्शकहरुले पनि अत्याधिक रुचाएका छन् । त्यति मात्र होइन् समीक्षकले पनि फिल्मलाई राम्रो भनेका छन् । राजनिति र प्रेम कथामा आधारित फिल्मको अहिलेसम्मको कलेक्सन हेर्दा १२ देखि १५ करोडसम्मको कमाई गर्ने निर्माण टिमको आशा छ । यो फिल्म दिपक र दिपाको टिमले ५०..
काठमाडौं, २८ असोज फिल्म 'कबिर सिंह'को सफलतापछि अभिनेता शाहिद कपूरले तेलेगु हिट फिल्म 'जर्सी'को हिन्दी रिमेकमा अभिनय गर्ने भएका छन् । 'जर्सी'को हिन्दी रिमेकलाई गोथम तिन्नानाउरीले निर्देशन गर्न लागेका हुन् । जर्सीको तेलेगु फिल्मलाई पनि गोथमले नै निर्देशन गरेका थिए । 'जर्सी'को हिन्दी रिमेकको लागि शाहिद कपूरभन्दा राम्रो अभिनेता अरु कोही नभएको निर्देशक गोथामले बताए । 'म मेरो तेलेगु फिल्म जर्सीको हिन्दी रिमेक बनाउने..
काठमाडौं, २७ असोज नायक विपिन कार्की र नायिका स्वस्तिमा खड्का उत्कृष्ट नायक नायिका घोषित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) ०७६ को छैटौं संस्करणको लागि यी नायक नायिका उत्कृष्ट घोषित भएका हुन् । विपिनले प्रसाद र स्वस्तिमाले बुलबुलवाट अवार्ड जितेकी हुन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सम्पन्न कार्यक्रममा ११ विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको हो । उत्कृष्ट फिल्म ‘बुलबुल’ भएको छ भने उत्कृष्ट..
बिहिवार, असोज २३, २०७६ साल
ऐजेन्सी, २३ असोज बागी, बागी २ र वार जस्ता फिल्मपछि टाइगर श्राफको इमेज एक्सन हिरोको बनेको छ । दर्शकले उनको फिल्ममा एक्सन दृश्यको प्रतीक्षा गर्न थालेका छन् । टाइगरको फिल्ममा एक्सनको स्तर झन् बलियो बन्दै गएको छ । एक्सन निर्देशकको दिमाग टाइगरलाई कसरी अझै फरक खालको भूमिकामा देखाउन सकिन्छ भन्ने हुन्छ । किनकि, टाइगरले जस्तोसुकै स्टन्ट पनि दिन तयार हुन्छन् । हालै ‘वार’..
बुधबार, असोज २२, २०७६ साल
काठमाडौं, २२ असाेज । बक्स अफिसमा ऋतिक रोशन र टाइगर श्रौफ स्टारर चलचित्र ‘वार’ ले आक्रामक व्यापार गरेको छ । याे चलचित्र २ सय करोडको क्लव नजिक प्रवेश गरेको छ । ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्शका अनुसार, चलचित्रको हिन्दी भर्सनले सोमवार भारतीय बक्स अफिसमा करिब २०.६० करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । उनका अनुसार, यस चलचित्रले सोमवारसम्ममा १८०.३० करोड रुपैयाँ कमाएको छ । यसमा..
शुक्रबार, असोज १७, २०७६ साल
बनेपा, १७ असोज बक्स अफिसमा चलचित्र ‘लुकाछिपी’ हिट भएपछि नायिका कृती सेननको माग खुबै बढेको छ । स्टाइलिस्ट सुन्दरीको नयाँ चलचित्र ‘हाउसफुल ४’ तिहारमा रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्रमा उनी नायक अक्षय कुमारको जोडी बनेर देखिदैछिन् । तर, भारतीय मिडियाका अनुसार कृतीले अक्षयसँग फेरि काम गर्ने पक्का भएको छ । नायक अक्षय कुमार चलचित्र ‘बच्चन पाण्डे’को छायांकन केही दिनमै सुरु गर्दैछन् ।..
बिहिवार, असोज १६, २०७६ साल
काठमाडौँ, १६ असोज ऋतिक रोशन र टाइगर श्रौफको चलचित्र ‘वार’ ले बक्स अफिसमा इतिहास रचेको छ । एक्सन र खतरनाक सीनहरू देखाइने बलिउड चलचित्रहरूका लागि यसले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो । ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्शका अनुसार, वारले पहिलो दिन ५३.३५ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाउँदै पुराना रेकर्डहरूलाई हराइदिएको छ । वार हिन्दीका साथै तमिल र तेलुगू भाषामा समेत रिलिज भएको छ । यो चलचित्र ऋतिक..
बर्दिया, १६ असोज थारु भाषाको चलचित्र ‘भुरभुरा रहर’ ‘च्यारिटी सो’ मार्फत आज पहिलोपटक प्रदर्शन गरिएको छ । बढैयाताल गाउँपालिका–८ स्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सभाहलमा चलचित्र प्रदर्शन गरिएको हो । थारु समुदायकी एक किशोरीको रहर पूरा नहुँदाको मनोवैज्ञानिक सेरोफेरोको विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर चलचित्र निर्माण गरिएको छ । ‘भुरभुरा रहर’ को अर्थ हावामा उड्ने रहर भन्ने बुझाउँछ । थारु..
काठमाडौं, १६ असाेज । नेपाली कथानक चलचित्र ‘पोई पर्‍यो काले’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । कमेडी, सस्पेन्स र प्रेमिल ट्रेलरमा चलचित्रका मुख्य कलाकार देखिएका छन् । सौगात मल्ल, पुजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, श्रृष्टी श्रेष्ठ लगायतका कलाकार ट्रेलरमा देखिएका छन् । शिशिर राणाको कथा तथा निर्देशन रहेको चलचित्रमा सौगात मल्ल, आकाश श्रेष्ठ, सोहित मानन्धर, पूजा शर्मा, श्रृष्टी श्रेष्ठ लगायत मुख्य भूमिकामा छन् । ‘पोई पर्‍यो..
बुधबार, असोज १५, २०७६ साल
काठमाडौँ, १५ असोज नेपालको महान चाड दशैं आम सर्वसाधारणसँगै पर्दामा देखिने सबै कलाकारहरुलाई पनि लागेको छ । तर, अभिनेता राजेश हमाललाई भने यति खेर कामको चटारो छ । राजेश एकपछि अर्काे म्यूजिक भिडियोमा व्यस्त छन् । टेलिभिजन कार्यक्रम ‘को बन्छ करोडपति ?’ सकिएपछि उनी अहिले देश तथा विदेशमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त छन् । उनले चलचित्रबाट आफुलाई टाढा राखेर म्यूजिक भिडियो गरिरहेका..
सोमबार, असोज १३, २०७६ साल
काठमाडौँ, १३ असोज चलचित्र कबड्डी कबड्डी कबड्डीले रिलिज भएको पहिलो हप्तामा ७ करोडभन्दा बढीको कमाई गर्न सफल भएको छ । दोस्रो साता पनि यस फिल्मले सानदार कमाइ गरिरहेको बताइएको छ । रिलिजका क्रममा राजधानीका सबैजसो मल्टिप्लेक्सहरु ८० प्रतिशत भन्दा बढी अकुपेन्सी थियो । यसरी पहिलो दिनमा नै एक करोड ४७ लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो ।नेपाली चलचित्रहरुमा यो २०७६ सालकै उच्च कलेक्सन..
काठमाडाैं, १३ असाेज । यसपटक दशैंमा कुनै पनि ठूलो नेपाली चलचित्र रिलिज नहुने भएपछि दशैंको बिदा हल संचालकहरुका लागि खल्लो हुने भएकाे छ । केही नेपाली चलचित्रले फूलपातिलाई प्रदर्शन मिति तय गरेका छन् । आशा गरौ, ती चलचित्रले खल्लो बन्ने संकेत देखिएको नेपाली चलचित्रको व्यापारलाई जगाउनेछन् । तर, यो बर्षको दशैंमा ठूलो ब्यानरका र दर्शकले प्रतिक्षा गर्ने चलचित्र छैनन् । दशैंमा राम्रो व्यापार गर्दै आएको ‘छक्का..
नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमाल पुरस्कृत हुँदै !
शनिबार, असोज ११, २०७६ साल
काठमाडौँ, ११ असोज नेपाली चलचित्रका लोकप्रिय नायक राजेश हमाललाई रु एक लाख राशिको पुरस्कारसहित सम्मान गरिने भएको छ । करीब ३०० चलचित्रमा अभिनय गरिसक्नुभएका नायक हमालले नेपाली सिनेमा उद्योगको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेबापत साधना कला केन्द्रले सम्मान गर्न लागेको हो । केन्द्रले असोज १२ गते ‘ट्रिब्युट टु मेगा स्टार राजेश हमाल’ कार्यक्रम गरी उक्त सम्मान प्रदान गरिने कला केन्द्रका अध्यक्ष मिलन मोक्तानले..
‘कबड्डी ३’ ले पहिलाे हप्तामै कमायाे ७ कराेड बढी
शुक्रबार, असोज १०, २०७६ साल
काठमाडौं, १० असाेज । बक्स अफिसमा लामो समयपछि नेपाली चलचित्रले उत्साहजनक व्यापार भएकाे छ। असोज ३ गते प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कबड्डी ३’ बक्स अफिसमा राम्राे व्यापार गरेकाे छ । ‘कबड्डी ३’ पहिलो हप्ता नै ७ करोड ३८ लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको छ । आज शुक्रबारदेखि दोस्रो हप्तामा प्रदर्शन भइरहेको यो फिल्मले पहिलो विकेन्डमा ४ करोड ३२ लाखको कमाइ गरेको हो । वितरण कम्पनी स्टेशन..
हलमा सुपरहिट बनेकाे 'छक्कापञ्जा २'लाई युट्युबमा दर्शकले किन गरे गाली ?
काठमाडौं, ८ असाेज । नेपाली चलचित्र 'छक्कापञ्जा २' युट्युबमा रिलिज भएकाे छ । दिपकराज गिरी र दिपा श्रि निराैलाकाे फिल्म 'छक्कापञ्जा २' मंगलवार युट्युबमा रिलिज गरिएको हाे । हलमा निकै रूचाइएकाे फिल्म बक्स अफिसमा पनि सफल सावित भएकाे थियाे । तर, 'छक्कापञ्जा २' लाई दर्शकले युट्युबमा मन पराएका छैनन् । फिल्मले युट्युबमा गालीको ओइरो पाएको छ । फिल्मलाई लिएर अधिकांशले बकवास भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । रिलिज भएको लामो..
सनी देओलका छोरा करण देओल अभिनीत फिल्म डुबेपछि
एजेन्सी, ७ असोज बलिउड सुपरस्टार सनी देओलका छोरा करणले डेब्यू गरेको फिल्म “पल पल दिल के पास” ले अभिनेता सञ्जय दत्त र अभिनेत्री सोनम कपूरको फिल्मलाई बक्सअफिसमा पछाडि पारेको छ । बक्सअफिसको कलेक्सन हेर्दा करणको फिल्म “पल पल दिल के पास” को कलेक्सन राम्रो देखिएको हो । करणको फिल्मसँगै २० सेप्टम्बरमा सञ्जय स्टारर फिल्म “प्रस्थानम” र सोनमको फिल्म “द जोया फ्याक्टर” एकैसाथ..
काठमाडाैं, ६ असोज रामबाबु गुरुङ निर्देशित चलचित्र ‘कबड्डी ३’ ले बक्स अफिसमा उत्साहजनक व्यापार संगै पहिलो विकेन्डमा ४ करोड ३२ लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको छ । दयाहाङ राई, उपासना सिंह ठकुरी, कर्मा, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, पुष्कर गुरुङ, माओत्से गुरुङ, रिश्मा गुरुङ लगायतका कलाकारको शीर्ष भूमिका रहेको यो फिल्म हेर्न लामो समयपछि फिल्म हलमा दर्शकको भीड लागेको हो । चलचित्रले..
चुलबुल पाण्डेकाे ‘दबंग थ्री’ ले पायाे ऋतिक रोशन र अक्षय कुमारको साथ
आईतवार, असोज ५, २०७६ साल
मुम्बई, ५ असाेज । बलिउड स्टार सलमान खानकाे ‘दबंग थ्री’ ले रिलिज अघि नै निकै चर्चा पाएकाे छ । ‘दबंग थ्री’ यसै डिसेम्बरमा प्रदर्शनमा आउने भएकाे हाे । चुलबुल पाण्डेकाे भूमिकामा रहने सलमान खानले डिसेम्बर महिनामा सिनेमाघरमा तहल्का मच्चाउनका भएका छन् । फिल्म रिलिजअघि सलमान खान ‘दबंग थ्री’ प्रति अत्यधिक ध्यान खिच्न चाहन्छन् । अर्को महिना अर्थात् अक्टोबरमा प्रशंसकले रबिन हुड पुलिसको दुनियाँको एक झलक देख्न पाउनेछन् । फिल्मको..
चलचित्र ‘कबड्डी ३’ समीक्षा : सरल कथा, सटिक प्रस्तुति
शनिबार, असोज ४, २०७६ साल
काठमाडौँ, ४ असोज माया गरेकी मैयाँ गौचनले काजीलाई छोडेर गयपछि मुस्ताङको नौरीकोटमा बस्ने वीरकाजी शेरचनको जीवन यतिबेला फिक्का छ । वीरकाजीले लामो समय मैयाँको माया पाउन कसरत गरिसकेको छ । अर्कैसँग भागेर गइसकेकी मैयाँ फर्केर आउनेमा अझै पनि उत्तिकै विश्वास र आशक्ति छ वीरकाजीको । वीरकाजी र मैयाँको यो कथा हो, चलचित्र ‘कबड्डी’ को । ‘कबड्डी’ हेरेका दर्शकलाई मैयाँ र वीरकाजीको कहानी..
शुक्रबारदेखि ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ प्रदर्शनमा
शुक्रबार, असोज ३, २०७६ साल
काठमाडौं, ३ असाेज । नेपाली कथानक चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ आजबाट प्रदर्शनमा आएको छ ।दयाहाङ राई तथा उपासना सिंह ठकुरी स्टारर रोमान्टिक कमेडी फिल्म कबड्ड-३ शुक्रबारदेखि रिलिज भएकाे हाे । रामबाबु गुरुङ निर्देशित चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ले शोलो रिलिजको अवसर पाएको छ । सोसल ड्रामा चलचित्रले सोलो रिलिजको मौका पाउँदा मल्टिप्लेक्समा उच्च शो पाएको छ । चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’मा दयाहाङ राई, उपासना सिंह ठकुरी,..
लप्पन छप्पन–२’को फस्ट लुक सार्वजनिक, यस्ताे छ सौगात र अर्पणको ‘डन अवतार’
बिहिवार, असोज २, २०७६ साल
काठमाडौं, २ असाेज । विहीबार फिल्म लप्पन छप्पन–२’को पहिलो पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रका कलाकार अर्पण थापाले आफ्नो फेसबुक मार्फत फिल्मको पहिलोपोष्टर सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपालका सर्वाधिक चलेका स्टारकास्टले भरिएको फिल्म ‘लप्पन छप्पन–२’ को दमदार पहिलो पोष्टरमा फ्रान्सको पेरिस स्थित आइफिल टावरको ब्याकग्राउण्डमा सौगात मल्ल र अर्पण थापाको दमदार लुकलाई प्रस्तुत गरिएको छ । फिल्म ‘लप्पन छप्पन–२’ हालै युरोपका विभिन्न शहरहरुमा छायांकन..
'कबड्डी कबड्डी कबड्डी'ले पायो सर्वाधिक शो, क्यूएफएक्समा मात्रै ६५ शाे
काठमाडाैं, १ भदाै । देशकको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्स चेन क्यूएफएक्सले 'कबड्डी कबड्डी कबड्डी'लाई सर्वाधिक संख्यामा शो दिएको छ। दयाहाङ राई तथा उपासना सिंह ठकुरी स्टारर रोमान्टिक कमेडी फिल्म 'कबड्ड३' लाई क्यूएफएक्सले आफ्ना देशभरका ९ स्टेशनमा कुल ६५ शो दिएको हाे। जसमा काठमाडौंका ५ मल्टिप्लेक्समा ३८ शओ रहेको छ भने मोफसलमा २७ शो दिएको छ। क्यूएफएक्सको राजधानी बाहिर ५ मल्टिप्लेक्स रहेका छन्। 'कबड्डी कबड्डी कबड्डी' रामबाबु गुरूङ निर्देशित 'कबड्डी'को..
‘कबड्डी ३’ ले दियाे गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’लाई तीन लाख सहयोग
सोमबार, भाद्र ३०, २०७६ साल
काठमाडौं, ३० भदाै । ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को टिमले भरतपुरमा निर्माणाधीन ‘गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’लाई तीन लाख रकम सहयोग गरेको छ । आइतबार ‘कबड्डी ३’ कलाकार दयाहाङ राई, विल्सन विक्रम राई र निर्माता मणिराम पोखरेलले ‘धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन’का अध्यक्ष सिताराम कट्टेल 'धुर्मुस'लाई चेक हस्तान्तरण गरे । देशको गौरव आयोजनामा सानो भए पनि सहयोग गर्न पाउँदा खुसी महसुस गरेको दयाहाङ, विल्सन र मणिरामले बताए..
आयुष्मान खुरानाको नयाँ फिल्म 'ड्रिम गर्ल'लाई पर्‍यो चोरीको मुद्दा
आईतवार, भाद्र २९, २०७६ साल
काठमाडौँ, २९ भदौ बलिउड अभिनेता आयुष्मान खुराना यति बेला निकै चर्चामा छन्। उनको नयाँ फिल्म 'ड्रिम गर्ल' ले कमाइको राम्रो सुरूआत गरेको छ भने प्रतिक्रिया पनि राम्रो पाएको छ। यसअघि उनको फिल्म 'आर्टिकल १५' ले पनि कमाइसँगै तारिफ बटुल्न सफल भयो। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार फिल्म निर्देशक प्रविण मोर्चालेले 'बाला' का लेखक निरन भट्ट र निर्माता म्याडक फिल्मस् विरूद्ध बम्बई उच्च अदालतमा मुद्दा..
Results 550: You are at page2of 19